January 2013 – nyashasengayi
Kuroorwa KwaMaidei part 1 : Zvinyorwa Zveshamwari Pafacebook
January 18, 2013 nyashasengayi
Asika zvekuti ijinda ramabo yakanga isiri nyaya yaizezesa sekutaura kwakanga kwaita tete. Ko yakagove mhosva here kuti akanga apenyerwa nemutunhu wemuchinda uyu.Ndiani aisaziva kuti Musarandega aiva rume rino ari hofori yadekadza kutarisa. Ko ihwo hunhu? Amaihwe Chisikana chakapishana nendangariro wena. Ari mundangariro kudai Maidei akafamba famba munhanga yevasikana achipiringishna nepfungwa kuti oita zvipi. Mumana mavo hapana akanga amboita zvanga zvafungwa nemhandara iyi . Ko yaiva mhosva here kuti akanga ada jaya iri asi aisakwanisa kusvitsa soko semunhu wechidzimai? Aizova mashura eshure zvikazivikanwa nemitunhu kuti ndozvanga aita.
Zvino akati ndoita hwekudii? Chisikana chakaona kuti chikasangwarira yaizofa kwacho chakuona jinda rakunokumbira sadza kumwe iye aripo achishuvira kuita nyachide. Saka chakazoti dhuu kufunga ndokuona kuti hapana maitiro achaizoita asi pamusoro pemadanha ekuendesera jinda mvura padare nekunoritsvagira hacha dzinopenya. Nyaya ka iri pakuti zviri pamoyo zvinzwikwe. Panguva iyoyi chakabva chafunga kukumbira nhembe yomuninína wake nokuti yaiva pfupi uye yakanaka kuti chiende kunobata basa iri chakachena.
“Iwe Marwei ,Marwei” , chakadeedzera nezwi repamusoro
“Uya pano hausi kunzwa kuti ndabvira kare ndichikusheedza? mhanya kuno kurumidza!”
“Muri kudeiko nhai vakoma?” Marwei akadavira, achishamisika kuti nezwi raMaidei. Akaziva nechemumoyo kuti pane zvikuru zvaiva mupfungwa dzemukoma wake.
Chaasina kuziva maidei ndechekuti jinda raikwenya mhuno nekasiyamwawo kuti dai mwanasikana aridawo asi chaimunetsa ndechekuti Musarandega aigarotaura kuti Maidei aizofanira kuita mukadzi wake wechitatu.
Apa tete vaMadei vakanga vachirongawo yavo tsoro neparutivi. Vanga vakangomirira kuwana nguva yakasununguka yetaura zvaiva pamwoyo wavo kumwana wehanzvadzi yavo. Vakanga vave kungoti mangwana mangwana “muroora ndauya kuzoona kuti muri sei negumbo?”…..Apa Maidei mwoyo waingova kujinda ramambo.
Shoko rakanga rasvika munzeve dzaMadei kare kuti kwaMusarandega kwaidyiwa zvekuti vaitofungirwa kuti vane divisi saka pakadai ndiani aida kusara . Tete nyangwe vaiita zvekabisira mhandara yakanga yatowona kuti yaive neaimutsigira. Mushure mekunge akumbira shashiko iya mwansika akabva apinda mubishi rekuzvishongedza. Akatanga arova tsoka akananga kurwizi rwaMakaira ndokuzvidira mvura kusvika agutsikana kuti akanga awota. Mushure mezvo akatora chuma chaakanga apihwa nambuya Mandijinyura ndokuti pfee hake muchiuno umu. iwo mafuta emuchinu sandi kunyiminya ikoko. Musi uyu mafuta aya akaita kunge aziva kuti kwakanga kune basa rakakosha raida kuitwa. Akabva apenya zvekuti kana nyeredzi chaiyo yaisakwanisa kumira pamakwikwi iwayo.
Maidei akange akaumbwa Nyadenga aine nguva yakazara. Kumeso kusina kana bundu kuchitsvedzerera se ruredzo munguva ye zhizha. Vhudzi rake rakasvibira kunge tsvubvu dzakanyatsosvika. Icho chivakashure chake chaiteerana nemuviri huri hunyanzvi hwe Musiki. Iro dundundu rakati tushu kuzara kunge richafashukira nekoko.Izvozvi ndozvaimupa manyawi ekuendera murume aneruremekedzo saMusarandega. Chigagairwa chakapinda munzira chakananga nechekumabvazuva chafunga zano rekunopotsera shoko ku jinda riya.
Kana museve woda nyama unosvotoka pauta! Chakanga chabaya chikatyokera. Mwanasikana kanga azvipira kuti nyange zvaizogona kumushoresa asi shoko rinenge rasvika. Zvichitangirawo kuna vakuru, “hanzi kuraidza chembere muto wegwaya hunzi wati ifire mudziva!” Imwi woye “Ihurukudyungu muchembere wedatya” zvinotokunda ngoma kurira zvetsvarakadenga Maidei. ……… Iro jaha parakaona chigagairwa chichiuya hana yakaita seichatsemuka nekurova, ikagotanga kubika yega manhanga, “yanga yatova nzwira pamuviri tsvimbo yarova dapi!”……. izvi zvakaita kuti nyaya irereukire mwanasikana nekuti runako rwake rwakamuitira basa.
Her Cry ,My Cry
January 6, 2013 nyashasengayi
Her Cry my Cry
Love sees a deeper sight
The cry of another sister in another land is mine
Her rape is mine
Her torture is mine
Her hunger is mine
Her heavy load is mine
Floods or not we cry together
Her broken heart is mine
Her mutilation is mine
Her injustices I feed on
All shared within me
Yet in all this anguish I have hope for her, just like she has hope for my trouble to
When her passion is thwarted, mine is gone
When her soul wails for her freedom, I’m a slave
When her hormones wreck havoc, I’m also emotionally unstable
In war zones we get hurt differently but the wound is deeper
when she cries; mine eyes will burn with tears for nations
When she is beaten the scars are deeper in me as I relentlessly watch
When her man is broken into pieces for the believed, I fell like I’ll never love again
When her breast is cut I cease to breast feed.
When they tell her to shut up, I’m silenced
When they make her drink vinegar my throat will shrink with forceful thirst
When her dreams remain dreams I sink to the way of the loser
if she can’t speak I’m, mute
When she’s sad, I’m down in the dumps
When her children suffocate from oppression I’m barren
my cry is her cry
I cry for my sister in DRC, my vagina is torn with hers
I cry for my sister in Pakistan, they threw acid at me for dressing up
I cry for my sister in Kasese Uganda, they made me eat my mouth and my nose they cut this afternoon
I cry for my sister in South Africa, they raped me to death for being a lesbian
I cry my sister for Cote D’voire, Now I can’t support any party I want to
I cry for my sister in China, they tied my feet for their sexual pleasure
I cry for my sister in India, My value is now left to my prostituted life benefiting timber
I cry for my sister in Zambia, they’ve just cut my clitoris and they’ve sawn me up
I cry for my sister in Nepal, they’ve burnt me for defending my other sister
I cry for my sister in Pakistan, I have no idea where our husband and the father of my children is?
I cry for my sister in Egypt, they chased me from Tahir Square, now victory is for the men
I cry for my sister in Tunisia, the revolution I enjoy no more, for I shall be remembered as martyr denied life
I cry for my sister in India ,raped me baseless on a moving bus, and figured the iron rod would bring me pleasure instead ,it ripped my intestines out, now I’m dead!!
I cry for my sister in Zimbabwe, I am in a shrinked space
I cry for my sister in Central African Republic; Kony is bailing for our blood in order to destroy womanhood which birthed him
I cry for my sister in Central African Republic, my dream man is a guaranteed rebel; Mr Right never existed after all.
I cry with my sister everyday for I am that voice in the desert crying and moving towards flowing peace
We dedicate our lives to building peace, where its possible to wake up one day without
A single thought, memory idea about war,
Everything and everyone will be positive minded and work for good only
And the language of war will become unspeakable and its voice inaudible
We are sisters in it for hope and lasting peace!!!!!!!!!!!!!!!